Tonga teny « La Reunion Kely » ilay biby hafahafa, maty nataon-ny olona sakafo - Vaovao farany
Home / Ambatobe / Ankadifotsy / biby hafahafa / mafana / Tonga teny « La Reunion Kely » ilay biby hafahafa, maty nataon-ny olona sakafo
Tonga teny « La Reunion Kely » ilay biby hafahafa, maty nataon-ny olona sakafo
Efa andro maromaro izao no niteraka resabe ilay biby hitan'ny olona eny Ambatobe sy amin'iny Ankadifotsy iny rehefa harivariva. Hatramin'ny omaly dia fantatra fa efa am-polony no voakaikitr'ity biby hafahafa ity.
Efa manao ny fisafoana ilay biby ny mpitandrro filaminana isan-kariva amin'iny faritr'Antananarivo iny. Ny sefo fokotanin'Ambatobe aza dia efa nandefa taratasy manamarina ny tena fisian'ny biby tamin'ny lehiben'ny distrika.
Io marain'ny zomà io dia niely ny resaka hoe nisy biby hafahafa matin'ny olona hono teny « La Reunion Kely » teny ny alakamisy hariva rehefa tafody ny mpivarotr'i Mahamasina. Nifanenjehan'ny olona tamin'ny kifafa sy sachet plastika ilay biby ka rendriky ny daroka, tsy vitan'izany fa mbola natsatsiky ny vahoaka ka nataony sakafo maraina.
Ny ekipanay moa izay tena niezaka ny hahazo sary dia indrisy fa tsy tonga ara-potoana, tsy nahita intsony na taolana aza : « Mitovitovy amin'ny tsiron'akoho ilay izy, ary azo karepohana tsara ny taolany, raha nampilaza mialoha ianareo dia namelànay kely na dia halainareo sary fotsiny aza, tena miala tsiny » hoy ity ny renim-pianakaviana iray raha nanontaniana.
Tsy fantatra hoe firy ny biby hafahafa eto Antananarivo fa iny anankiray iny izany dia voan'ilay ohabolana hoe : « Ela nitoratorahana ka nahavoa voamason'angatra », na ilay hoe « Ilatsahan'ny varatra eo am-pang*rezana ka sady maty no mihosin-t*y ». Nihevitra tokoa mantsy izy fa izy irery no afaka hanaikitra. « Aleo handehandeha aty fa ataonay mahita an'i Jakôba » hoy Atoa Jacquot, pasitera-na fiangonanaa sekta anankiray eo amin'ny fokotany.
Tonga teny « La Reunion Kely » ilay biby hafahafa, maty nataon-ny olona sakafo Reviewed on avril 22, 2016 Rating: 5
Ambatobe X Ankadifotsy X biby hafahafa X mafana
Tera-ketotra ilay mpakasary, nisavoana ny môngôlif...
Tonga teny « La Reunion Kely » ilay biby hafahafa,...